देउवा र प्रचण्डका मतियार बनेका नेपाल समूहलाई ८ मन्त्रीको ललिपप ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
देउवा र प्रचण्डका मतियार बनेका नेपाल समूहलाई ८ मन्त्रीको ललिपप !
नेपाल समूलाई मागेजति मन्त्री दिएर भएपनि गठबन्धनमा राख्नका लागि काग्रेस र माओवादीले नेपाल समूह फकाउने प्रयास जारी राखेका छन्
२०७८ श्रावण ११, सोमबार १५:२०:००
शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई गठबन्धनमा बस्नका लागि चर्को लविङ जारी रहेको छ । नेपाल समूलाई मागेजति मन्त्री दिएर भएपनि गठबन्धनमा राख्नका लागि काग्रेस र माओवादीले नेपाल समूह फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
नेपाल दैनिकजसो देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलमै छन् । अहिले गठबन्धनले सबैभन्दा बढी माधव नेपाललाई नै महत्व दिएको छ र माधव नेपालको लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छ । तर एमालेभित्र ओली र नेपालबीच वार्ता गराएर ‘पावर शेयरिङ’ गरेर भने पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रयास जारी छ ।
उनीहरुले ओली र नेपालबीच वार्ता गराउन खोजेको ५ दिन भइसक्यो । तर नेपालले लिखित प्रस्तावबिना वार्तामा बस्न रुचाएका छैनन् । खासमा नेपाल वार्तामा बस्नै चाहेका छैनन् । ओलीलाई शनिवार युथ फोर्सका कार्यक्रममा जानबाट उनी निकटै नेताहरुले रोक्नुको कारण पनि माधव नेपाललाई भड्किन नदिन नै हो । तर नेपालले भरोसा गरेका र नेपाललाई बिनाशर्त साथ दिइरहेका नेताहरुका कुरा सुन्दा ओलीले अध्यक्ष पद छाडेमात्र एमाले एकता हुनसक्छ, जुन कुरा सम्भव छैन ।
शनिवार दिनभर आफ्नै निवासमा आफू निकट सांसदहरुसँग छलफल गर्दा नेपाललाई केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर पार्टी एकता नगर्न दबाब दिइएको छ । नेपालले पनि आफू १० बुँदे सहमतिको आधारमा एकतामा जान नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल अहिले दोस्रो पुस्ताको भरमा छैनन् । तेस्रो र चौथो पुस्ताको आडमा उनले दोस्रो पुस्तालाई क्रस गरेर विश्वासको मत दिनेदेखिका निर्णयहरुमा अघि बढेका हुन् । आफू निकट तेस्रो तहका नेताहरुसँग नेपालले दोस्रो तह (स्थायी कमिटीका सदस्य)हरुबाट धोखा हुन सक्ने बताउने गरेका छन् । नेपाल ओलीसँग मिल्नै नसकिने देखिरहेका छन् । तर दोस्रो तहका नेताहरुको दबाबमा छन् ।
माधव पक्षबाट वार्तामा सहभागी भएका कतिपय नेताले पहिलो पुस्ताका नेतालाई बिदा गरेर भने पनि एमाले एक बनाउने भन्न थालेपछि नेपाल झनै झस्किएका छन् । उनले भीम रावल,भीम आचार्य, योगेश भट्टराई लगायतका केही नेताको नामै लिएर अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । भोलि अलग हुनु पर्दा यी मध्ये कतिपय छुट्ने संकेत समेत नेपालले गरेका छन् ।
माधव नेपालको सजिलोका लागि संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजनका लागि सहज बनाइदिन सत्ता गठबन्धन तयार छ । तर त्यसो गर्दा महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि फाइदा हुन्छ । नेपालले नयाँ दल दर्तामा हतारो गरेका छैनन्,तर सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धनलाई हतारो छ ।
सम्भवतः निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता टुंगियो भने मन्त्रिपरिषद विस्तार हनेछ । त्यो अवस्थामा माधव नेपालले अझै एक पटक एमालेमै ओलीमाथि हाबी हुने सम्भवना देखे भने तत्काल माधव पक्ष सरकारमा नजान सक्छ । नत्र एमालेको छिनोफानो पनि यसै साता हुन्छ र माधव नेपाल सत्तारुढ हुनेछन् ।
विश्वासको मत दिने बेला माधव पक्षका १० जना तटस्थ बसेपछि ७ जना सांसदसहित नेपाललाई साथ दिएका अर्का नेता प्रेम आलेले सम्माजनकरूपमा एकता नहुने हो भने एमाले एकतामात्र भनेर कार्यकर्तालाई न्याय नहुने प्रतिक्रिया दिए । माधव नेपाललाई संकटमा साथ दिनेहरू नै एमालेको वास्तविक पंक्ति भएको उनको भनाइ छ ।
ओली पक्षका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवालीहरु र नेपाल पक्षका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यहरु एकताको प्रयासमा थाकेका छैनन् । नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाएर भने पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ ।